Yakanakisa Kaviri kuposita ingroud kusimudza L4800 (E) yakashongedzwa nebhiriji-mhando rutsigiro ruoko Mugadziri uye Fekitori | Tonghe
Kaviri kutumira ingroud kusimudza L4800 (E) yakashongedzwa nezambuko-mhando rutsigiro ruoko
Inoshongedzerwa nerudzi-rworudzi rwunotsigira ruoko, uye mativi ese ari maviri ane bhiriji rinopfuura rinosimudza siketi yemota, inoenderana nemhando dzakasiyana dzemavhiri emagetsi. Sketi yemotokari iri mukubatana zvizere neinosimudza pallet, ichiita kuti kusimudza kuve kwakagadzikana.
Iyo inorema yekusimudza huremu ndeye 3500kg, inoenderana nekusimudza panguva yekugadzirisa mota.
Iyo huru unit yakavigwa pasi pevhu, dhizaini iri compact, uye hwaro hwekuvaka basa repasi idiki, ichichengetedza mari yekudyara.
Iyo nhovo inogadzirwa nesimbi pombi uye ndiro yesimbi mushure mekukotama, chimiro chinoonekwa, uye kusimudza kwakadzikama.
Zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi, mushure mekunge chishandiso chadzoka, ruoko rwekutsigira runogona kugadzirwa munzira mbiri dzekupaka: 1. Kudonha pasi; 2. Kunyura muvhu, iyo yepamusoro peiyo ruoko rwekutsigira inoyerera nepasi, uye ivhu rakanyanya kunaka.
Iyo yakapusa dhizaini dhizaini inovimbisa kuti iyo yakazara mashandiro enharaunda akavhurika uye akatsetseka kana mota ikasimudzwa kuti igadziriswe.
Yakashongedzerwa neyakaomeswa yekumisikidza sisitimu kuverengera kuwiriranisa kwekusimudza kwemaviri anosimudza posvo. Mushure mekugadziriswa kwemidziyo uye kutsanangurwa, hazvichadiwe kuti udzokorore kukwirisa kwekushandisa kwese.
Yakashongedzerwa neyakagadzirwa mamaki uye hydraulic chengetedzo mudziyo, yakachengeteka uye yakasimba.
L4800 (E) yawana CE chitupa
Nokusimudza chinzvimbo 3500kg
Max. Nokusimudza kukwirira 1850mm
Simba 2 Kw
NW 1300 makirogiramu
Post dhayamita 140mm
Pashure: Kaviri kutumira ingroud kusimudza L4800 (A) kutakura 3500kg
Zvadaro: Kaviri kutumira ingroud kusimudza akateedzana L5800 (B)
Inotakurika Imwe Post Post Mota Simudza, Kaviri Post Pasi Pasi Pasi Simudza, Kaviri Post Inground Simudza, Imwechete Kuita Cylinder, Inotakurika Hydraulic Scissor Mota Simudza, Nhare Imwe Post Post Kusimudza Mota,